သင့်ကိုယ်သင် နေ့တိုင်း ပြန်မေးသင့်တဲ့ မေးခွန်းများ!
လူတော်တော်များများမှာ နေ့စဉ်ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်သုံးသပ်တဲ့သူက မရှိသလောက်ကို ရှားပါတယ်။
အခု ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် နေ့တိုင်းပြန်မေးသင့်တဲ့ မေးခွန်းလေးတွေပါ။
ဒီမေးခွန်းလေးတွေကို သင့်ကိုယ်သင် နေ့တိုင်းမေးမယ်ဆိုရင် ကိုယ်ဟာအောင်မြင်မှုရဖို့ ဘယ်လောက်ထိလိုအပ်သေးလဲ...?
ဘယ်အခြေအနေတစ်ခုကို ရောက်နေပြီလဲ ဆိုတာ စမ်းစစ်ပြီးသားဖြစ်မှာပါ။
- ဒီနေ့အတွက် အကျိုးအရှိဆုံးဖြစ်အောင် အချိန်တွေကို ဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲထားလဲ?
- ဒီနေ့အတွက် အရေးအကြီးဆုံး လုပ်ရမယ့်အရာ ၃ ခုကဘာလဲ?
- ဒီနေ့ဘာတွေ သင်ယူလေ့လာဖို့ လုပ်ထားလဲ?
- ဒီနေ့ဘယ်အပိုင်းကို ပိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ ရည်မှန်းထားလဲ?
- ဒီနေ့ ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ စိတ်ကို ဘယ်လိုကျန်းမာ၊ ပျော်ရွှင်အောင်နေထိုင်ဖို့ စီစဉ်ထားလဲ?
နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် အသေးလေးတွေထားပါ။
ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် အသေးလေးတွေကို ပြီးမြောက်အောင်လုပ်ပြီး အိမ်မက်အကြီးကြီးတွေကို အကောင်အထည်ဖော်ပါ။
"တစ်နေ့တစ်လှမ်း ပုဂံဘယ်ရွေ့မလဲ" "တောင်ကြီးဖဝါးအောက်" စတာတွေက တစ်လှမ်းချင်းလှမ်းခဲ့ရတာပါ။
အိမ်မက် ကြီးကြီးမက်ပါ။ အသေးလေးတွေကို ပြီးမြောက်အောင်လုပ်ပြီး အောင်မြင်မှုရယူပါ။
Read 698 times Last modified on Tuesday, 27 November 2018 14:24
daily questions should be asking yourself
ဘီလျံနာဆိုတာ ဂဏန်းပေါင်းစက်နဲ့ တွက်ချက်မှု သက်သက်ပါဗျာ
English စာအမြန်ဆုံးတတ်ချင်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲ ? ? ?